Fitaovana fanarenana data. Avereno ny Lost & Rakitra voafafa.
DataNumen Data Recovery dia ny tsara indrindra fitaovana fanarenana angona eto amin'izao tontolo izao. Afaka sitrana lost ary voafafa ireo rakitra sy lahatahiry ao amin'ny kapila faran'izay betsaka araka izay tratra, ka hampihena ny fatiantoka amin'ny lozam-pifamoivoizana.
Free download100% azo antoka
Hividy izaoNy antoka 100% Fahafaham-po
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,643)
Ahoana no mahavelom-bolo
Nahoana DataNumen Data Recovery?
Fanarenana # 1
20+ taona ny
Ny vokatrao no tsara indrindra ary nanao ny most! Saingy heveriko fa tsy misy afaka mamerina ny angon-drakitra ananakoost. Nahazo indray izay efa ananako, izay mihoatra
... Hamaky bebe kokoa
Ny vokatrao no tsara indrindra ary nanao ny most! Saingy heveriko fa tsy misy afaka mamerina ny angon-drakitra ananakoost. Namerina ilay efa azoko izy io, izay mihoatra ny vokatra teo aloha, fa tsy nisy na iray aza tamin'ireo data 3.5 herinandro tsy hita. Raha nieritreritra aho fa teo ny angona tsy hita, dia tena nandoa $ 50 aho nalaina, ary mety ho $ 100 raha Positive aho fa teo daholo ireo data tsy hita. Saingy tsy izany, ka tsy nilanja 100 $.
Ramatoa Mascha Fujimoto
Interface tsotra be
Safidio ny Drive Source na Disk
Safidio ny Safidy fanarenana
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Data Recovery v2.4
Fanohanana ho an'ny Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 ary ny Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019.
Tohano ny karazana rafitra fisie rehetra, ao anatin'izany NTFS, FAT, FAT32 ary Ext2.
Fanohanana hamerenana ireo rakitra lost noho ny fanavaozana ny drive, ny fahalovana amin'ny drive na ny antony hafa.
Tohano hanarenana ireo rakitra voafafa.
Fanohanana mba hamerenana ireo renirano mifandraika amin'ny lost ary rakitra voafafa.
Fandraisana an-tanana ny fizahana angon-drakitra kapila matevina ary hikaroka lost ary voafafa ireo rakitra manana karazana fantatra mihoatra ny 70, amin'ny alàlan'ny fampiasana rafitra manampahaizana anaty izay manana fahalalana be dia be momba ny toetra sy ny firafitry ny karazana rakitra.
Tohano hamerenana ireo rakitra voafafa avy amin'ny fitoeram-bokatra.
Fanohanana hahazoana sitrana lost ary voafafa ny lahatahiry sy ny lahatahiry hierarchy miverina.
Tohano ny anaran'ny rakitra sy ny anaran'ny fampirimana.
Tohano hanome anarana ny rakitra sy ny lahatahiry ho azy rehefa misy ny duplicate.
Mampiasà mpiorina mpamosavy tsotra hanoroana anao faingana amin'ny fomba mora sy mahomby ny dingan'ny fanarenana.
Fanohanana hanivanana sy handamina ny lost ary voafafa ireo rakitra sy lahatahiry arakaraka ny masontsivana isan-karazany.
Azo ampiasaina ho fitaovana forensika solosaina ary fitaovana fikarohana elektronika (na e-Discover, eDiscovery).
mampiasa DataNumen Data Recovery hamerenana ireo fisie amin'ny Drive-nao
Hadisoanao ny famolavolana ny kapilao, fafafao ny rakitra na lahatahiry nataonao tamina ny kapila nataonao, na nesorinao ny fitoeram-bokatrao alohan'ny hahitanao fa misy zava-dehibe ao. Inona no azonao atao?
Tsy misy ahiahy. DataNumen Data Recovery afaka manampy anao. Azonao atao ny mampiasa an'io fitaovana mahery vaika io hanapahana ny kapila, hitady ny lost ary voafafa ireo rakitra, avereno indray ary raiso ny most miverina aminao ny angona sarobidy.
Azonao atao ny misafidy ny kapila na ny kapila hatao scan, avy eo tsindrio ny bokotra "OK" ho start ny fizotran'ny scan.
Fanamarihana: Alohan'ny hijerena ny kapila na ny kapila, dia alao antoka fa tsy misy rakitra na lahatahiry ao anaty kapila na kapila misokatra. Ary tsy misy rindranasa hafa miditra amin'ny kapila na kapila.
Raha tsy izany, azonao atao ny misafidy ity menio manaraka ity:
mba hijerena rakitra fisie fa tsy kapila na kapila.
Azonao atao ihany koa ny misafidy an'ity menio ity:
hanokatra ity dinika manaraka ity:
ary apetraho ny safidy scan alohan'ny fizahana scan.
Taorian'ny starting ny fizotry ny scan, ny bara fandrosoana
dia hanondro ny fandrosoan'ny scan. Mandritra ny fizotrany dia azonao atao ny manindry
bokotra hampiatoana ny fizahana scan.
Aorian'ny fizahana scan, raha misy lost ary azo sitrana ireo rakitra na lahatahiry voafafa, ho hitanao ny topy mason'ireo rakitra ireo:
Zahao ireo rakitra na lahatahiry tianao ho sitrana, avy eo kitiho
bokotra, ho hitanao ity dinika manaraka ity:
Azonao atao ny mametraka ny lahatahiry famoahana ao amin'ilay dinika ary kitiho ny bokotra "OK" ho an'ny starfanarenana ireo entana voamarina.
DataNumen Data Recovery dia ho sitrana daholo ny entana voamarina ho anao. Aorian'ny fizotry ny fanarenana dia hiposaka ity boaty hafatra manaraka ity:
Avy eo ianao dia afaka manokatra ny lahatahiry famoahana ary miditra amin'ireo entana nody.
DataNumen Data Recovery Navoaka tamin'ny 2.4 Novambra 9 ny 2020
Hatsarao ny taham-pahasitranana.
DataNumen Data Recovery Navoaka tamin'ny 2.3 aprily 14 ny 2020
Hatsarao ny vokatra aseho.
Amboary ny sabotsy vitsivitsy.
DataNumen Data Recovery 2.2 dia navoaka tamin'ny 28 Febroary 2020
Tohano hanamarinana ireo fisie tsirairay ho azo averina.
Tohano hanitsiana ny haben'ny fampisehoana an'ireo sary.
Hatsarao ny fampisehoana.
DataNumen Data Recovery 2.1 dia navoaka tamin'ny 8 Janoary 2020
Hatsarao ny fahamendrehana fanarenana.
DataNumen Data Recovery Navoaka tamin'ny 2.0 septambra 19 ny 2019
Avereno soratana ny motera fitiliana sy fanarenana.
DataNumen Data Recovery 1.0 dia navoaka tamin'ny 28 Desambra 2010
Fanohanana ireo endrika kapila rehetra.
Avereno jerena ireo rakitra voafafa NTFS aelin'ny.